Mumazuva ekare, sekuru-sekuru vedu vakafanotaura kukohwa maererano nemamiriro ekunze paIsita, vachiziva kuti ivhu rakaorera sei uye chirimo chinodziya. Mhemberero dzeIsita tsika dzakatanga paMugovera Mutsvene. Uyezve, izvi zvine chekuita neveOrthodox neveKaturike.
Vatendi vakaenda kumachechi, vakatora chikamu mumasevhisi, vakabatidza Easter makeke uye dhayi. Uye zvino yaive nguva yemisangano yemhuri, mazororo kupwanya kutsanya uye mufaro mukukudza kumuka kwaJesu. Asi ndedzipi dzidziso dzeIsita dzaivapo pazororo rechechi uye chii chingadai chakacherechedzwa neramangwana?
Ngano netsika nezveIsita
1. Panguva yekubheka makeke eIsita, zvaisatenderwa kupika uye kutaura nezwi rakasimudzwa. Mamiriro ezvinhu mumba aifanirwa kunge akadzikama uye nerunyararo. Kwakaitiswa nharo kuti ipapo mapaseki aizozobuda ave makuru.
2. Makeke akatsaurwa ePasika aishuvira kuunza kumba nekukurumidza. zvaitendwa kuti ndiani aive wekutanga kuyambuka chikumbaridzo nepasque - izvo uye goho rekutanga rakapfuma gore rino. Paitove neshoko rinoti: "Gorosi richakura nekukasira semuridzi waro anomhanya nekeke." Kupfuudza munhu wese kwaireva kuve pamberi pevamwe vari pabasa uye kugashira rupo kubva kubasa ravo.
3. Kumedura ndiro dzeIsita hakusi mashura akanaka. Izvi zvakavimbisa matambudziko mubhizinesi kana pakurwara kwemuviri.
4. Kana musikana aine miromo kana tsiye pazororo - ichi chiratidzo chemusangano uri kuuya nemudiwa wake kana kuita matchmaking.
5. Chidimbu chekeke chakarasikirwa panguva yekudya kweIsita mutumwa wemari inokurumidza uye kubudirira.
Mamiriro ekunze zviratidzo zveIsita
1. Denga rinonaya paKumuka kwaKristu rakaporofita zhizha rimwe chete rakatonhora uye rakasuruvara.
2. Kutinhira kwakasimba kwakafanotaura kuti mwaka wekuvhuvhu wakadonha pasina kunaya pamberi. Rukova, asi pasina mabhanan'ana nemheni, chiratidzo che "nyoro" chitubu.
3. Frosty Isita mucherechedzo wegore rakaorera.
4. Kana kuchitonhora kunze kwehwindo, asi tembiricha iri pamusoro pe zero, unofanirwa kutarisira kuoma kwemwedzi yezhizha. Kana chando chanyungudika zvachose muminda, mwaka unozove nezvibereko.
5. Mamiriro ekunze akapfava, denga risina makore uye kudziya kwakadzikama musi weSvondo - inovimbisa zhizha rine zuva uye rakakomborerwa, rakafuma muchingwa.
6. Kana husiku pamberi peIsita kune nyeredzi uye yakanyarara - kune chando chiri kuuya.
7. Naka wakanaka Chipiri mushure mehoridhe - inoratidza mwaka wemvura wezhizha.
Nezvido zvakanaka munguva ino yakajeka!
Nei Isita ichipembererwa panguva dzakasiyana?
Nzira yekuudza vana nezveIsita?
Sei zvikafu zveIsita zvakabikwa uye zvakaiswa mazai?
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,481 masekondi.